Al shabaab oo Xukun Dil ah ka fuliyay Degmada Baardheere | KEYDMEDIA ONLINE
Al shabaab oo Xukun Dil ah ka fuliyay Degmada Baardheere
Baardheere (KON)--Maleeshiyada Al shabaab ayaa markale Xukun Dil ah ka fuliyay Degmada Baardheere, ee Gobolka Gedo xilli ay isasa soo tarayo Khilaafka Horjoogiyaasha Kooxda u dhaxeeya.
Nin lagu magacaabo Maxa'ed Cali Maxa'uud, oo la sheegay in uu kamid ahaa Ciidamada Dowladda Federaalka ee Gobolka Gedo, ayaa Shalay Gelinbkii danbe waxa ay Al shabaab ku toogteen Fagaaro ku yaalla Degmada Baardheere, iyadoo Boqolaal Dadweyne ah ay usoo daawasho tageen.
Ninka Al shabaab ugu magacaaban Maxkamadda Degmada Baardheere, oo Goobta Dilka ka dhacay kula hadlay Shacabka ayaa ku goodiyay in ay dili doonaan Cid kastaa oo kasoo horjeesta Amarkooda, iyo Dagaalka ku dalka ka hurinayaan.
"Mar ayuu gacanteena soo galay Askariga, waan cafinay balse markale ayuu dib ugu laabtay Ciidamada Dowladda, waxa ay Maxkamadda ku xukuntay in la toogto, waana lagu fuliyay Xukunkaasi Maanta," ayuu yiri Horjooge ka tirsan Al shabaab.
Lama hayo Cadeymo Madax-banaan oo muujinaya in Ninka la dilay uu ahaa Askari katirsan Ciidamada Dowladda, marka laga soo tago sheegashada Al shabaab oo Dhiig dadka ku baneysta wuxuu ka tirsan yahay Urur Hebel ama waa Jaajuus.
Keydmedia Online-Xafiiska Muqdisho